बिँड तातेर के गर्नु, ताप्के तातेन ! – " कञ्चनजंगा News "
बिँड तातेर के गर्नु, ताप्के तातेन !
No Comments on बिँड तातेर के गर्नु, ताप्के तातेन !
कान नछामी कागको पछि लाग्ने नेपालीको चरित्र नै हो । अझ मनोरञ्जन उद्योग त यो मामलामा एक नम्बर नै छ । यस्तै चरित्रको शिकार बनेकी छिन्, मोडल नीति शाह ।
पूर्व मिस नेपाल इन्टरनेसनल नीति शाह निर्माताको नजरमा ‘हिरोइन मटेरियल’ हुन् । धेरै पहिलेदेखि निर्माता–निर्देशकले उनलाई फिल्मका लागि पछ्याउँदै आएका छन् । यो सूचीमा भुवन केसी र अनमोल केसी पनि छन् । दुवैले ‘ड्रिम्स’ कै लागि पनि नीतिलाई ‘एप्रोच’ गरेको खबर थियो ।
पछिल्लो हप्ता फेरि एक पटक नीतिले ‘प्रेमगीत ३’ बाट हिरोइन बन्ने अफर पाएको समाचार आयो । केही मिडियाले त नीति प्रदीप खड्कासँग फिल्म खेल्न आतुर रहेको ठोकुवासमेत गरे । प्रदीपसँग डिस होमको विज्ञापन पनि खेलेको र उनको पछिल्लो रिलिज ‘लभ स्टेसन’ हेर्न आएकोले पनि खबरमा सत्यता रहेको आशंका थियो ।
तर, होइन रहेछ । अफवाहको बजार फैलँदै गएको देखेपछि नीतिले मुख खोलिन् र फेसबुक स्टोरीको सहारा लिँदै आफूले फिल्म गर्न लागेको कुरा हल्ला मात्र रहेको प्रष्टीकरण दिइन् । बिँड तातेर के गर्नु, ताप्के तातेन । मिडिया त नीतिलाई हिरोइन बनाउन उद्यत थियो, तर नीतिले मानेको भए पो !
← स्वादबिनाको ‘दाल भात तरकारी’ → केटीको निहुँमा पुल्चोकमा ग्याङ फाइट, अन्सलले ज्यान गुमाए